China YASKAWA MOTOMAN-GP50 kulayishwa kunye nokothula umzi mveliso weerobhothi kunye nabenzi | Jiesheng
I-YASKAWA MOTOMAN-GP50 iyalayisha kunye nokothula iirobhothi
Inkqubo ye- I-YASKAWA MOTOMAN-GP50 iyalayisha kunye nokothula iirobhothi Inomthwalo omkhulu we-50Kg kunye noluhlu oluphezulu lwe-2061mm. Ngokusebenzisa imisebenzi yayo etyebileyo kunye nezinto eziphambili, inokuhlangabezana neemfuno zabasebenzisi abanzi ezinjengokubamba izinto ezininzi, ukuzinzisa, ukuhlanganisa, ukugaya kunye nokusebenza.
IMOTOMAN-GP50 isebenzisa ukwakheka kwengalo engenamngxuma ezineentambo ezakhelwe-ngaphakathi, nto leyo enciphisa izithintelo zentshukumo ngenxa yokuphazanyiswa kwentambo, isuse ukunqamka, kwaye ilungele ukufundisa.
Inkqubo ye- IMOTOMAN-GP50 iyalayisha kunye nokothula iirobhothi ifezekisa amandla okuphatha okumandla ngokuqala kwiklasi yayo yobunzima obulayishayo, isantya, kunye netorque evumelekileyo ye-axis axis. Ukufezekisa esona santya siphezulu kwiklasi ye-50Kg kunye negalelo ekuphuculeni imveliso yabathengi. Ngokuphucula ukukhawulezisa kunye nolawulo lokuncipha, akukho mfuneko yokuxhomekeka ekumeni, ukukhawulezisa kunye nexesha lokuncipha lifinyelelelwe kumda, kwaye izinto ezinzima kunye nezibopho eziphindwe kabini zinokufakwa.
6 50Kg Ubukhulu: 2061mm ± 0.03mm
570Kg 4.5kVA 180 ° / umzuzwana 178 ° / umzuzwana
Oku kulayishwa kunye nokothula irobhothi MOTOMAN-GP50 ilungele i- Ikhabhathi yolawulo yeYRC1000, Ubungakanani obuqhelekileyo ekhaya nakwamanye amazwe. Ukusetyenziswa kwangaphandle, isiguquli sinokusetyenziselwa umbane wamandla angaphandle. Ngokunciphisa ukuhla nokuhamba okubangelwa ngumahluko kwisantya sokusebenza, ixesha lokuqinisekisa liyancitshiswa. Irobhothi ifundisa ixesha kunye nokuma komzimba kungangqinwa yimodeli yeerobhothi ye3D. Ngokuchukumisa isikrini, isikhombisi sinokuhanjiswa kwaye sikrolwe ngokusebenza okunomdla, okunokusebenza okuphezulu.
Egqithileyo I-YASKAWA ephethe ngobuchule i-robot MOTOMAN-GP35L
Okulandelayo: YASKAWA UKUPHATHA ROBOT MOTOMAN GP165R
Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphathwa kweMizi-mveliso yeRobhothi, Ukuphathwa kweRobhothi ngokuzenzekelayo, Ukuphatha ingalo yeRobot, Iinkqubo zokuphatha izixhobo zeRobotic, Ukuphathwa kweRobothi yeAxis,